သင်မမြင်ဖူးသေးမယ့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အထူးဆန်းဆုံး လျှို့ဝှက်ချက်များ – XB Media Myanmar
သင်မမြင်ဖူးသေးမယ့် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အထူးဆန်းဆုံး လျှို့ဝှက်ချက်များ
March 29, 2019 Bestie_Author
ဆန်းကြယ်တဲ့ လောကကြီးမှာ လူသားတစ်ယောက်ဟာ အကုန်အစင် မြင်ဖူးတွေ့ဖူးဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ ပြောချင်လွန်းလို့ တို့အတွက် အပျင်းပြေစရာ လူအများစု မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။
၁. ဒါဟာ သွေးလုံးဝမရှိဘဲ သန့်စင်ရှင်းလင်းနေတဲ့ နှလုံးသား ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးအလှူရှင်ရဲ့ ဆဲလ်တွေကိုပါ သန့်စင်အောင် ဆေးကြောပြီးနောက် နှလုံးအစားထိုးလက်ခံမယ့်သူရဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဒီနှလုံးအလွတ်ထဲကို ထိုးထည့်လိုက်ပြီး အသားကျအောင် ထားရမှာပါ။
၂. အီစတာကျွန်းမှခေါင်းများ ဆိုတဲ့ရုပ်ထုတွေကို အေဒီ ၁၁၀၀ ကနေ ၁၅၀၀ အတွင်းမှာ ပိုလီနီးရှန်းလူမျိုးတွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရပေမယ့် ဘာအတွက်ဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သူတို့မှာ ခေါင်းတွေသာ ထုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်းပေါ်မှာ ၁၅၀ လောက်ရှိတဲ့ ရုပ်ထုတွေ ဘေးကို တူးဖော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်လုံးတွေက မြေအောက်ရောက်နေတာသာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါတော့တယ်။
၃. ဖလာမင်ဂို ကြိုးကြာတွေဟာ လူကြိုက်များတဲ့ ဌက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ လှပကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖလာမင်ဂိုပေါက်စလေးကတော့ ဘဲပေါက်ထက် နည်းနည်းလေးပဲ သာတာကို အခုလို တွေ့ရမှာပါ။
၄. လူသားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အပူအအေး၊ အထိအတွေ့ စတဲ့ Sensor သိစိတ်တွေကို အာရုံကြောတွေကနေ ပေးပို့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လူသားတွေရဲ့ အာရုံကြောတွေကို ဖြန့်ခင်းပြသထားတာပါ။
၅. ကျားတစ်ကောင်ရဲ့ အမွှေးကို ရိတ်ထားစဉ် တွေ့ရပုံဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက ကျားတွေရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အစင်းကြားတွေဟာ အမွှေးပေါ်မှာသာ ပေါ်နေတာ မဟုတ်ဘဲ သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာပါ ရှိနေတာပါပဲ။
၆. လရဲ့ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (Dark side of the moon) ဆိုတာကို ကြားဖူးမှာပါ။ ဒီပုံကတော့ Dark side of the Moon ကို ကမ္ဘာနောက်ခံထားပြီး မိုင်ပေါင်းတစ်သန်းအကွာမှ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ကင်မရာက Deep Space Climate Observatory ယာဉ်ပေါ်က ကင်မရာတစ်လုံးပါ။
အွန်လိုင်းမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ Gravity အပြင်ဘက် ခုန်ထွက်လိုက်တဲ့ လုလု​အောင်​ရဲ့ဗီဒီယို
ရင်ထဲကို ဆို့နင့်သွားစေမယ့် “ဟစ်တိုင်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခု